Abanganikwa izimvume abadayisela izingane utshwala: Zuma – LIVE Express
Abanganikwa izimvume abadayisela izingane utshwala: Zuma
uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usenxuse ukuba banganikezwa izimvume zokudayisa labo abadayisela izingane zesikole utshwala.
uZuma ukusho lokhu ngenkathi ekhuluma nezinkulungwane zabantu abebehambele umgubho wosuku i-Youth Day, nobusenkundleni yezemidlalo, i-Orlando Stadium, e-Gauteng, ngoLwesine.
uMengameli uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala yenye yezinkinga ezihlasele kakhulu intsha yakuleli.
“Ezinye izingane zeqa esikoleni futhi ziyabonakala ziphuza emathaveni nemifaniswano yesikole,” kusho uZuma.
“Sinxusa iziphathimandla ukuba zingazikhiphi izimvume kwizitolo ezidayisa utshwala ezinganeni noma ezisebenza eduze nesikole zibheke ngokusobala izingane zesikole njengamakhasimende. Lezo zimvume kumele zibuyekezwe,” kuqhuba uZuma.
Uthi labo abadayisela izingane izidakamizwa notshwala baphula umthetho futhi babulala isizwe ngakho kumele baboshwe.
uMengameli uqhube wathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kunobungozi bokucekela phansi imindeni eminingi kanye nezwe. Uthi abanye abazali sebeze bahlalele ovalweni ngenxa yokuhlukunyezwa yizingane zabo ezidla izidakamizwa.
Ube esenxusa intsha ukuba ihlukane nezidakamizwa.
“Ake sinciphise bakwethu etshwaleni,” kuncenga uZuma.
Kugwetshwe ikhehla (64) ngokudlwengula ingane ena-10